Nhau - Chinese Nyowani gore rezororo uye skrini yekudzivirira kurongeka
Chinese Nyowani Nyowani iri kuuya sekufamba kwenguva, inozivikanwawo seMuchirimo Mutambo. Ndiyo mhemberero huru kwazvo muChina, ine zororo remazuva manomwe. Sechiitiko chakajeka kwazvo chegore negore, yegore reChinese Nyowani rinotora mavhiki maviri, uye mugumo unosvika wakakomberedza Evha yeChinese Idzva Idzva, nemarambi emagetsi matsvuku, mafirita ane ruzha, mabiko emhuri nemapara.
Nekuputika kwecowid-19 mu2020, iri kuchinja hupenyu hwevanhu nebasa. Nedziviriro inoshanda uye kutonga kwehurumende yeChinese, hupenyu hwevanhu hwadzokera kuchimiro chakajairika. Asi sezvo mamiriro ekunze anotonhora, huwandu hwehutachiona hunowedzera. Hurumende inodaidzira vanhu kuti vashandise Mutambo weChirimo munzvimbo dzavanoshandira uye kuronga maawa asiri iwo ekuvhura emabhizinesi kuti vadzivise kuyerera kwenhamba huru yevanhu.
Pakutanga kwekumhanya kweMutambo weChirimo, vafambisi vezvifambiso vakasimbisa matanho ekudzivirira kumuka kwezviitiko zveCOVID-19 uye nekupa basa riri nani kune vafambi.
Vazhinji vevashandi vanobva kune rimwe dunhu, saka vari kuronga kudzokera kumusha kwavo kumhuri yemubatanidzwa. Saka manejimendi akarayira kuti utangezororo reCNY kubva Jan 30th kusvika Feb 15th. Yese yekugadzira mutsara wevadziviriri vechidzitiro ichavharwa musi wa3 Kukadzi.
1. Iwo maodha akasaina pamberi paJan 15th, achatumirwa pasati pazororo
2. Iwo maodha akasaina mushure maJan 15th, acharongwa kuti agadzire mushure mehoridhe, akaendeswa pamberi paKurume
Uye vatengi vedu vachiri kugona kutaura nevanhu vedu vekutengesa nekutengesa kupedzisa mabasa anoenderana uye kutanga chirongwa chekutenga kutsva kwevadziviriri vechidzitiro. Uye iro basa rekugadzira mushure mehoridhe rakarongedzwa futi.
Ndapota gamuchirai zvido zvedu zvepachokwadi zveGore Idzva kune mumwe wedu nevatengi.
Dai Gore Idzva riunze zvakawanda zvakanaka zvinhu uye zvakapfuma maropafadzo kwauri uye kune avo vese vaunoda, ndinovimba une anonyanya kufara uye kubudirira Goredzva.
Post nguva: Jan-30-2021